Gob Maxbuus ah: Abwaan la kulmay xayawaan ay Soomaalida caan ku tahay oo sii dabar go’aya - BBC News Somali
Gob Maxbuus ah: Abwaan la kulmay xayawaan ay Soomaalida caan ku tahay oo sii dabar go’aya
4 Febraayo 2019
Image caption Dad badan waxay muuqaal ahaan isku khaldaan Gumburiga iyo Dameerka
Abwaan Xasan Huruuse ayaa xero xayawaannada sii dabar go'aya lagu xannaaneeyo oo ku taalla dalka Mareykanka kula kulmay Gumburi, oo ah nooc u eg dameeraha, oo laga yaqaanno Soomaaliya iyo qeybo kooban oo ka mid ah gobolka geeska Afrika.
Inta badan dadku marka ay arkaan xayawaankan waxay durba u maleynayaan inuu yahay dameer, laakiin xaqiiqdu waa in Dambeerka iyo Gumburiga ay waxyaabo badan ku kala duwan yihiin.
Booliska K/Afrika oo qabtay haragga 5,000 oo dameer
Jarmalka: Dameer qaniinay gaari oo lacag lagu ganaaxay
Pakistan oo Shiinaha la gashay heshiis ay ugu dhoofineyso kumanaan kun oo dameero ah
Inkastoo muuqaal ahaan ay aad isugu egyihiin haddana waxaa jira astaamo lagu kala garan karo, iyagoo dabeecaddooduna aysan isku mid ahayn.
Gumburigu wuxuu giir giir madow ku leeyahay afarta addimood wuxuuna ka mid yahay xayawaanka duur joogta ah ee aan dadka weheshanin, laakiin dameerku astaamahaas ma laha wuxuuna la joogaa dadka.
Image caption Gumburiga waa xayawaan duur joog ah oo aan waligiis la rabaayadeynin
Sidoo kale Gumburigu wuxuu dabeecad ahaan la mid yahay dameer farowga, oo isagana ka mid ah duur joogta.
Gob Maxbuus ah
Abwaan Xasan Huruuse ayaa Gumburiga aqoonsaday xilli uu booqanayay xero lagu xannaaneeyo xayawaanka sii dabar go'aya, oo ku taalla gobolka Viginia ee waddanka Mareykanka.
BBC-da ayuu uga warramay sida uu kulankooda ku billowday iyo sheeko uu sheegay iney dhex martay, taasoo dabcan uu maansadiisa ku cabiray.
"Sannadkii 2014-kii ayaan shaqo u tagay jaamacad ku taalla Virginia. Marka anigoo daawasho u tagay goob lagu hayo xayawaanka ama dhirta sii cirib go'aysa ayaan si kadis ah kula kulmay Gumburi".
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sii sharraxay sida uu suugaanta ugu cabiray, wuxuuna yiri: "Ka dib waan u dhawaaday, maadaama uu ahaan jiray gefer aan waligiis rabaayad noqon, oo aan dab joog ahayn oo duur joog ah, maantana silig lagu xiray, ayaan u bixiyay Gob Maxbuus ah".
Qaar ka mid ah erayadii maansada uu abwaanku ka tiriyay kulankaas ayaa ahaa sidan:
-Waa galab Isniineed
-Waa goob aqooneed
-Waa gobol Virginia
-Galka seefta kala baxay
-Kulan loo guddiyayoo
-La gorfeeyay ma ahayn
-Kadis baanuu nagu galay
-Giddi habar dugaagoo
-Deyr loo gedaamiyo
-Xero loo goleeyayoo
-Goob qudha ku wada nool
-Guulahey na kulansii
-Ishaa gulucda eegmada
-Xiskii waayo gaagaxay
-U gardhigatayoo tidhi
-Gurdamahan isdaba galay
-Daltabyadu ku gaar tahay
-Inaan sii garoocdiyo
-Garasho iga mudanaa
-Sinji guuri maayee
-Waa wagan gammaanoo
-Misna heybta gaarka ah
-Ninka gada yaqaannaa
-Gaar ugu abtiriyoo
-Wali daab gubkii iyo
-Giir giir hariiryihii
-Isma doorin guudkii
-Gibil iyo car lama marin
-Gadgaddoonna kuma dhicin
-U goleeyay toyashada
-Deeg deg gumburiyoow
-Gundhi jeenigoo qaad
-Gorros oo haddana hogay
-Goonidii u faalloo
-Hadba hoos isula guux
-Soo gaabi qoobkii
-Dhegta godanna raarici
-Deymada gamuunka ah
-Hadba ii galaa bixi
-Iga garayay socotada
-Geesteyda soo aad
-Gadhka deyrka soo saar
-Indha goof ku ururoo
-Gacalo u basaasiyo
-Ilmadii ka gabax tidhi
-Geydhiyo la daacyaa
-Wuxuu yiri Galoosow
-Gartayoo waxaa tahay
-Raggii geela dhaqan jiray
-Raggii geeska dagi jiray
-Raggii waran galka ahaa
-Raggii geerisada iyo
-Gosha bidix ka luli jiray
-Waxes maan gad noqotayoo
-Geestaan u eegaba
-Guntun iyo maroor yare
-Gacallow waxay tahay
-Ma is iri galoosow
-Raacdo galangal cawdiyo
-Gurmad iyo col iman buu
-Garwadeen u yahayoo
-Waa gaade iyo sahan
-Misna waran gamuurkii
-Gumuca iyo leebkii
-Markaan waayay gaashaan
-Isasoo gur malihii.
Image caption Maansada uu abwaanka ka sameeyay la kulanka Gumburiga wuxuu ku magacaabay Gob Maxbuus ah
Xayawaanka loo yaqaanno Gumburiga ayaa afka qalaad lagu yiraahdaa 'Somali Wild Ass', waxaana uu halis ugu jiraa inuu ka dabar go'o dunida.
Marka laga soot ago Soomaaliya, meelaha kale ee sida weyn looga yaqaanno waxaa ka mid ah keymaha ku teedsan dhinaca koonfureed ee Badda Cas ee gudaha dalka Eretariya iyo gobolka Cafarta ee waddanka Itoobiya.